October 18, 2017 - Written by Editor
Muqdisho:-Waxaa saaka ka socda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaliya banaanbaxyo waaweyn oo loga soo horjeedo qaraxii lagu laayey dadka shacabka ah ee ka dhacay is goyska Zoobe. Boqolaal shacab ah ayaa waxaa ay ku qaylinayey erayo ka dhan ah ururk Al-shabaaab waxaan ay ku dhawaaqayen doooni meyno Al-shabaab,Dooni meyno Dhiiga cabe iyo erayo kale.
Dadweynaha banaanbaxa samaynayey ayaa waxa ka muuqday caro xooggan oo ay ka qaadeen dadkii Soomaliyeed e muslinka ahaa ee lagu xasuuqay
is goyska Zoob ee mgaalada Muqdisho. Banaanbaxa ka soconay magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya xili shalay uu Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed uu ku dhawaaqay in Shacabka Muqdisho ay ka dhiidhiyaan ficilka Al-shabaab ee cadawnimada ah ee lagu xasuuqayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan.
Banaanbaxan ayaa la filayaan inay ka soo qaybgalaan masuuliin ka tirsan dawlada Soomaaliya, ururada bulshada rayidka iyo dadweynaha ku dhaqan degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho, waxaa kale oo la fasaxay dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadihii si ay uga qaybgalaan banaanbaxa ka socda Muqdisho.
Dhinac kale Banaanbaxyo waaweyn ee looga soo horjoodo ururka Al-shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay Gobolada dalka Soomaaliya iyadoo qaraxii lagu laayey dadka shacabka ah e ka dhacay isgoyska Zoobe uu u muuqdo mid ay buslahada Soomaaliyeed ka samaynayaan kacdoon shacab oo ka dhan ah ururka Al-shabaab.
Hoos ka daawo Tv-ga Universal iyo STntv oo gudbinaya banaanbixii ka dhacay magaalada Muqdisho